Sawirro: Waare oo mashaariic ka dhagax-dhigay degmada Warsheekh | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Sawirro: Waare oo mashaariic ka dhagax-dhigay degmada Warsheekh
Sawirro: Waare oo mashaariic ka dhagax-dhigay degmada Warsheekh
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr Maxamed Cabdi Waare iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Degmada Warsheekh ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaaa xarigga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgaliyay halkaasi.
Madaxweynaha oo ay safarkiisa ku wehelinayeen Wasiirka dib u heshiisiinta Dowladda Hirshabelle, wasiir ku xigeeno,xildhibaano,Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe, Guddoomiyaha Degmada Balcad iyo Mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Maamulka Hirshabelle, waxaa Warsheekh kusoo dhaweeyay Maamulka Degmada, Xildhibaanada Golaha deegaanka iyo xubno kale.
Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa xarigga ka jaray mashaariic dan guud ah oo laga hirgeliyay Degmada Warsheekh, isagoo sidoo kale daahfuray gogol dib u heshiisiineed oo beelaha dega degmooyinka Warsheekh iyo Cadale.
Madaxweynaha Hirshabelele ayaa Degmada Warsheekh kula kulmay Maamulka Degmadaas iyo Xildhibaanada Golaha deegaanka,waxa uuna kala hadlay sidii ay u xoojin lahaayeen midnimada iyo ammaanka degmada ku taal xeebta Badweynta Hindiya.
Maqaal horeMaxkamad la soo taagay rag loo haysto kiiska Hodan Shanlayste.
Maqaal XigaDowladda Soomaaliya oo agab gaarsiisay magaalada Kismaayo
Sii-hayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha oo balan qaad u sameeyay Haweenka